Chisiya – The Jagged Summit of Creativity
Simbilimbi, Na F.J. Nyambare (Sir Yoro)
Bhururu, bhururu, nhai bhururu wangu,
Une chokwadi here iwe?
Ndaiti hudera asi iweka nhasi wandikanga mate.
Hwako hunyasire wandisiya mukanwa muri kangwa.
Paye tichakura zvimbuzi wainyora nendove,
Kuchikoro matebhuru uchipara nematombo.
Ko nanhasi here nhai Simba?
Zvawava nendebvu wani sekakotora.
Ndakakutora ndikati chiuya dhorobha,
Nendandi muhuro ukati hausiye,
Musi uya pagungano rebhavhudhe raTobhi,
Takakuona wodonha nepoto uchinwa muto,
Nanhasi zita rako vanongoimba: "Simbilimbi vadhesve"
Ndakakutsiura ukati zvapera.
Mako mumoyo uchibika zvitsva.
Takasvika nepo pamusiwo we Pick n Pay
Ukanyora kumusana kwemuchinda uya kuti ; ”Mahobho ndibhudhi"
Ndakatozomira ndini ndodemba demba,
Iwe warova chitsoka ndibereke.
Pamusangano paya musi weChina,
Nemunwe yako wakaitei pamuchovha wa Chairman?
Ukati haina kugezwa rega ndidzaratadze;
"Clean me ndinoba huku"
Asi chii nhai Simba?
Takambotora nguva usingafambe uchitya kurohwa,
Ndikati ini zvaiwana ngwarati.
Ndazivei hangu kuti uri kashiri zvako kane muririro wako.
Nhasi ndati ndikupinzewo machena.
Umbotsapfunyawo zvakarungwa nenyanzvi.
Wandiitei nhai Simbilimbi?
Ukati vanofanira kusara vachikuziva,
Chokwadi here mu Nandos,
Kusiya waisa rwako rwunyoro?
Dai wanyora nepenzura nani zvaidzimika.
Kuita hwekupara here nebanga murume mukuru?
"Simbilimbi was here"
Wotoshama n'ai dzekuzvimbirwa uchiti "Chimakuruwani"
Aiwa bodo wandiorora Simba bhururu.
Kuona Simba azonzi Simbilimbi hunhubu.
Nhasi ndakanda mapfumo pasi,
Ndaudzawo Fungai wekwaJayaguru nezvako.
Ndokuzongoti hake ; "Dira rizare bhururu."
Sir Yoromosi kana kuti Murayanhiki semazivikanirwo aanoitwa nevazhinji, ndinyanduri anobva mudunhu raShe Mashayamombe kuMhondoro. Iri izita rekunemerwa kubva pakunyandura kwaakaita pfungwa dzevakawanda mugore ra2014 pane chimwe chiitiko chemunharaunda iyoyo asi rake rekuzvarwa naro ndiFibion Joel Nyambare. Zvekunyora Yoromosi akazvitanga mugore ra2010, achibatsirwa naVaMushore vaiva mudzidzisi papuraimari yake iyoyo paNyangwene Primary School muMhondoro imomo. Akazosimudzirazve rwendo rwake rwekuva nyanduri ari kusekondari paRio Tinto Mhondoro High School (yava kunziwo Rio Zim iye zvino) achibatsirwa nemudzidzisi wake weShona, Amai Chembwa. Akazotsikisa rimwe rebasa rake mugore ra2020 mumubatanidzwa wenhetembo unonzi Maungira eZimbabwe. Zvimwe zvezvinyorwa zvake zviri mumamwe mabhuku anoti Dzinobva Muropa, Shamhu ine Munyu uye Ruvarashe. Kozotiwo mamwe ari kutsikiswa anoti Nhetembo Dzepasichigare uye Manyukira eNhetembo. Nyambare anofarira kuraira mukunyora kwake kunyange zvazvo achizombonyora rudo, nyunyuto uyewo dzemugudza. Mubatei pafacebook (Fibion Joel Nyambare, Nhetembo tv), youtube (nyanduri sir yoromosi) twitter (nyanduri sir yoromosi), uyewo instagram.
PaChisiya	Uncategorized	Leave a comment May 9, 2022 May 9, 2022 1 Minute
Nduri Itsva DzaChamapezi Dhliwayo
Ndakataura kare kare nemadzitateguru enyu.
Ndiri mukati menzvimbo dzinoera .
Nanhasi ndichiri kutaura.
Handimire kuchengera angu macheche.
Zvino teererai muteererese imi vatema!
Dzokerai kutsika dzemadzibaba enyu .
Semai kudeura ropa pachenyu.
Ropa rinoshura gwenga nekuti rinopinga nhuruka.
Dananai imi vatema pachenyu.
Hakuna rwumwe rudzi rwunokudai.
Zvino batai apa mupabatisise chaizvo!
Musayemure tsika nemagariro evasinamabvi.
Musavasiye vachipinda munzvimbo dzirere madzitateguru enyu.
Musarega vanamatonganyika vachidya zifa remukaka nemazenga euchi nevauyi.
Ivhu nderenyu nezviri mariri ndezvenyu .
Ndini Izwi rinobva kudengadenga.
Chirega kuchema kani.
Chirega kuchema kani iwe-e!
Zvakaitika zvakaitika imhepo yakatovhuvhuta ndokupfuura.
Ndizvo zvavari vanhu vacho.
Ndizvo zvavave kuita ava.
Kurwadziswa idenda redzihwa rinobata munhu wese.
Huya kani mudiwa huya.
Ndibate ruoko tiyambuke.
Tiende kure kure kusina anotitevera.
Kwedu tega kusina vanotiparadzanisa.
Kwatichanopururudzirwa muchato wedu nenjiva.
Ndinzwe mudiwa kani ndinzwe.
Chandichadya ndicho chauchadya.
Pandichavata ndipo pauchavata.
Pandichatsika ndipo pauchatsika.
Nguva ino inoti iwe neni.
A-ah! a-ah ndinoda kuziva zvakavanzika Mwenewazvo?
Swedera uti pedyo neni gada Mwenewazvo.
Ndinoda mhinduro inondigutsa semugaiwa.
Inga upfu ukakumbira unondiudza wani?
Midziyo ikakumbirwa ndisipo ndiri kundari
Inga unosvikotaura wani kuti wagova ndisipo?
Ko,izvo zvidobi zvawakaita mauro ndikasara ndisina mate mumukanwa wakazvitorepi?
Tave nemakore maviri tiri tese,
Tikaita  goremwana ,goremwana .
Asi zvidobi zvedu zviviri chete
Ko,icho chekumaodzanyemba wakachiwanepiko?
Wakapangurirwa muto usina ndima naaniko?
Iye zvino watsva nhutu hauchaguti .
Tikapopotedzana wondinemera kuti VaKadora.
Ko,ivo VaZimhungu wakavawanepiko?
Raanoguta nderaakaraidzwa pakutanga.
Zvino akamuraidza akapota .
Iwe kudomupawo nemwoyo wese
Paanopedza kuridya anokuyenzanisa neakatanga.
Kutarira ndiro dzevamwe haaregi.
Kuri kutsvaga chakachenjedza.
Wemakwato haungamufadzi kusvika paanoda
Unomutambidza mukombe pamwe iye anoda komichi.
Wemakwato haana mugoni kukwata haaregi.
Revai idi  mhani imi musatye!
Danai mhuka nemazita adzo .
Udzai vanhu zviito zvavo zvakaipa musatye!
Musavapoterera semunokwira gomo.
Vadzorei semombe dzinorunzira kubindu rine muriwo wakaiswa mushonga.
Kuvanza chakaipa kuvhara guru renyoka neruoko.
Zinyekenyeke rukonye runoodza.
PaChisiya	Uncategorized	Leave a comment April 14, 2022 1 Minute
Na Emmanuel Sigauke
Kumusha taiva vemhiri
Nekuno tiri vemhiri zvekare;
Taiva naRunde na Gwen’ombe,
TIchiti kwese kwataifanira kuenda
Kwaiva mhiri kwaRunde kana kwaGwen’ombe.
Kuenda kudhibha, mhiri kwaGwen’ombe,
Kuenda kuchigayo kwaTakavarasha, mhiri kwaRunde
Kuenda kusumha kana matobwe kuChishamba, mhiri.
Kuenda kumambuyu kwaMaride, kana kuvurimbo kwaMhike, mhiri.
Paiva nekuenda mhiri kwaiunza mafaro,
Kuenda mhiri kwaRunde kunoona muchato kwaGumbochuma
Kuenda mhiri kwaRunde kunokwira bhazi reHarare paMazarire
Kuenda mhiri kwaGwen’ombe kunotamba bhora kuChiware,
Kana kunoona mhosva dzichitongwa kwashe Mhike
Nekuti vatongwi vaiuya nembudzi yourairwa dare,
Mapapu nemushiya kupwere, dziwane matambiro,
Vatsengi venyaya vachivaraidza mazino nemunyepfu,
Uku upenyu hwevatongwi huchitararwa muvhu
Ramangwana rako richireruka kana kukoromoka,
Asika matongero ashe aiva ekuyananisa nekusimudzira upenyu.
Pakazovapo kwataiyambuka nzizi kunoona twusikana,
Ndisingakanganwi rwendo rukuru kwaMadzivadondo,
Uko taishanyira musikana waLeni,
Pandaiva nemakore gumi, iye ane gumi nematatu.
Leni anga ati rebei, otoputitsa mapundu ehujaya;
Tikati hendei, ndokufumobatawo jongwe muromo
Kuti tinosvika risati rarova nhongonya.
Poita paya pataiyambuka Runde,
Kutiza hondo yapisa maMazvihwa,
Tichinogamuchirwa nerukudzo kwaChivi,
Nekuti ivo vaiti kana kwavo yapisa
Taivatambira kuno sehama dzedu chaidzo
Vogarawo kusvika mavivi adzima—
Asika hondo futi: maitosona ukama chete
Cherozvo manga makamboburana kare.
Pwere tichitiza hondo
Tosvikowana mafaro akatimirira mhiri
Totamba zvedu kunge paisava nechaishaisa vakuru hope.
Touya kuno, tiri vemhiri
Kune avo vanobva kweduwo.
Apo, pamhiri pa Sacramento, vanobva mhiri kwaNgezi,
Vandinototi kana ndashanyira ndiyo yangu hama kuno.
Uko, mhiri kwe American River,
Kugere vanobva kwaTakavarasha, mhiri kwaRunde
Ndorangarira tichinofara Takavarasha,
Koti kuno, kana tafunga mafaro
Vanotidana mhiri kweAmerican
Tonovidza zuva tichigocha hochi
Nekupuruzira magirazi ezvinodhaka
Tozodzokako migwagwa yati gwa,
Mapurisa enzira atonorararawo.
Apa tinenge tanamwa, asi kufamba pore pore
Mhosva yekubatwa kuno wakagungwa
Inokudzoseresa mhiri kwamakungwa
Woita zvekufemera pamusoro
Segwaya rakwakukira kunze kwaMaizezi.
Chero nekuno tiri vemhri,
Chikwata chinogara mhiri kwa San Joaqin chakasisa.
Ndivo vakasvika zuro uno uyu,
Asi vatova nedzimba midhadhadha,
Mabasa emuno ndivo vatongi
Mari vachishaiwa zvekuita nayo
Kana kuziva marwadzo ekupera kwemwedzi
Anotishaisa hope, tichiti zvibhadharwa totaga nechipi.
Ivava vakati uyai kubhavadheyi,
Rodzai miromo, wedzerayi nyota,
Munonoguta ikoko, kunyanya kana makashinga
Nekuti muchanwiswa zvine mazita
Amusingagone kuverenga, mugodyiswa
Zvimbishi zvinotsvedza, zvekuti mukapusa munosemeswa,
Chero dzimwe hove dzamuchanodyako,
Dzine ruvara ruchena kukunda mukaka
Mukasangwara munozvirutsa zvese
Zvamunofanira kuchengeta mukati
Kuti muzive kuti chinonzi mhiri chii,
Uye munovambuka makungwa sei
Uye vambuko inokuvandutsai sei.
Mugotuka vadzimu venyu
Movati ko makore ese aya
Sei musinawo kutiratidza nzira
Inosvitsa kurifa rakadai?
Asika vamwe venyu,
Chinonzi midzimu chacho,
Chero chinzonzi mwari chacho
Pamaiti kuyambuka kwenyu
Rusununguko rwaikusvitsai kure kwezvinokataza.
PaChisiya	Uncategorized	1 Comment April 5, 2022 2 Minutes
Zvinoita sadza! Takangoti tichiburuka bhazi paChimanimani Village kwava kuchimhanyira kwaibva munhuwi waro. Ipapo ndanga ndabva mukusangana neumwe murume wechidiki seni, uyo anga andiona ndichidzerekera kumusuwo webhazi ndokuti, “Makanangepi ishe?”
Ini ndokuchiti, “Tisu maticha matsva ekwaNdima., kuRusitu.”
“Zvatoita tawandirira. Neniwo ndakananga kuRusitu; ndiri kunotanga basa paprimary.”
“Ipapo momirira anobva Masvingo kana Buruwayo achinanga Chipinge.”
“Handiti mati muri kunosvika kuRusitu? Kutori pedo neChipinge kukunda Chimanimani Village yacho.”
“Mangoerekana masvika Chipenge, haiwa, matonaka,” vakadaro ambuya vaya vondisiya vananga kwanga kune chainge chingoro chemaOrange. Kudotsegaira zvavo kunge vaisashushikana nenyaya dzekushaya mabhazi idzi. Ini apa ndongomira-mira, kushaya kuti ndodii, chero zvazvo ndanga ndaudzwa zvekuita.
Ndakatevedzera zvese zvandanga ndaudzwa ndokuchizonosvika Chipinge masikati eChipiri, ndatomborara panze pebhawa repaBechinafu. MuChipinge muya chero ngoro chaiyo yekuendesa nayo kuRusitu ungaiwana? Saka ndakatorara pamusika, mvura ichizvinaira zvayo yakasununguka. Musi we Chitatu pane akazonditi nditore bhazi raidzokera kwaMutare asi ndonoburukira paturn-off yekwaMutambara, inova ndiyo nzira yaizonanga kuChimanimani. Takanopasvika paTurn-off ava masikati chaiwo, ndokuchiwana pane bhazi rekuChimanimani ranga rafirapo, bhazi refu, rakapendewawo zvakanaka chose; asi ranga ramboti ifei. Vakarigadzirawo rikakosora zuva ratorereka. Ndiro bhazi ranga radai kutisvitsa pamusika weChimanimani uya uri pedyo nehotera inorarwa navashanyi vanovinga makomo. Ndipo pandanga ndadai kusangana naMoulta, mudzidzisi seni.
Ko iye zvanga zvambomuitira nyore here? Muchinda uyu anga atochembererawo parwendorwu. Mazuva mana achiedzawo kuenda kubasa. Iye anga abva kwaMutoko, kunova ndokwaiva kumusha kwake, uko anga apedza dzidzo yehudzidzisi paMutoko Teachers’ College. Anga atora bhazi rekwaMutare paMbare rikafa kanomwe panzira, vachingoudzwa kuti vasanokwira rimwe sezvo iri ranga rine makanika waro mariri, saka kurigadzira kwaiva nyore. Pavakazosvika maMutare ranga ratova zuva repiri ari parwendo, atofonera kuchikoro kwake vakamuti ngaatore chero nguva yaaida. Saka nanhasi, anga achiri kungoedza kuenda kubasa, achipota achifonera chikoro, vomuti achasvika hake kana vematenga vada.
Tichifamba angu maziso aiva achicherechedza makomo eChimanimani; ndokwaiuyiwa nevashanyi vaibva kunyika dzakaita saana Germany, United States, chiBritain, nedzimwe dakadaro. Ini hangu ndanga ndisati ndamboshanyira makomo embiri aya, uye handaitarisira kunoakwira chero zvazvo ndanga ndoshanda pedyo nawo. Asi aiyevedza kuatirisa. Randanga ndakayeva tichifamba raiita kunge raiziva kunge ndanga ndakaritarisa, huma yaro ichipenya kunge raida kundikoka kuti ndizoona zvaraiva nhazvo. Gomo guru rine mhanza uye tubvuzi twehungwaru. Gomo guru rinonzi raiva nemapako airura, mapako aiba munhu umwe pagore, iwo mabvakure aiita kunge ane nzeve dzakavuwiwa nesimende. Ini kwete, makomo ndaingoayevera kure, saizvozvi ndichifamba hangu zvekuzengurira, dumbu rati tashu seremhashu, ndichifamba nzeve dzichinzwa zvaitaurwa na Moulta uyo aingunoimba nezvekunakidza kwaaita Mutoko.
“Tava pashinyasi mudhara,” akadaro Moulta achiri kungomhanya pasina kwakanangwa. Patakabonderana ndopandakarangarira kuti neni ndanga ndichiri kumhanya nanhasi, kumhanya kuya kunoita kunge kunotimba panzvimbo imwe chete. Takazongoerekana tamira pamberi pechimota tatarisana nemuchairi wayo, ambuya vanga vakatozvitsamwiravo zvavo nechakare.
PaChisiya	Uncategorized	4 Comments September 21, 2014 April 5, 2022 4 Minutes
PaChisiya	Uncategorized	Leave a comment March 16, 2012 1 Minute
PaChisiya	Uncategorized	Leave a comment December 19, 2011 December 19, 2011 2 Minutes